Desktọpụ ekwentị na-agagharị agagharị maka Email Na-emeghe | Martech Zone
Ekwetaghị m na m dị iche karịa ọtụtụ mmadụ. M na-elele email ogologo ụbọchị niile na iPhone m ka m wee nwee ike ịrụ ọrụ, enwere m ike ilekwasị anya na nsogbu ndị kachasị mkpa. Ngwaọrụ mkpanaka m bụ ngwaọrụ m kachasị na ịmepe na ịhazi ozi m na-enweta. N'ezie, ọ gaghị emerụ ahụ mgbe emelitere ozi email ndị ahụ maka ngwaọrụ mkpanaka. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ iji nweta email gị na enyi na enyi, hụ na ibudata Otu esi eme ka Email gị na enyi na enyi.
Ndị debanyere aha na-anata ozi ịntanetị n'ofe ọtụtụ nyiwe na ngwaọrụ. O yikarịrị, email gị na-akụ igbe ozi Gmail ha, na-amụnye ekwentị ha, ma nwee ike ibuga ya na akaụntụ ọrụ ha. Mana ị maara ebe ndị na-ege gị ntị na-emepe ozi email ọhụrụ gị?
a infographic site Litmus na-enye ihe akaebe na ebili mmiri agbanweela ma ekwentị agabigala onye ahịa email desktọọpụ ahụ!
Tags: emailozi iphonelitmusemail mkpanakaimewe email imewesteti email ghari